Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.1 Okwu Mmalite
Na-eme nnyocha na-amụ Azụ dolphin na-apụghị ịjụ ha ajụjụ. Ya mere, dolphin na-eme nnyocha na-amanye amụ omume. Na-eme nnyocha na-amụ ụmụ mmadụ, n'aka nke ọzọ, a ga-uru nke eziokwu na anyị sonyere nwere ike ikwu. -Arịọ ndị mmadụ ajụjụ nwere kemgbe akụkụ dị mkpa nke na-elekọta mmadụ nnyocha ruo ogologo oge, na dijitalụ afọ ma na-enyere na-achọ mgbanwe ụfọdụ ná nnyocha e mere nnyocha. N'agbanyeghị enweghị nchekwube na ụfọdụ nnyocha e mere na-eme nnyocha ugbu a mma, m na-atụ anya na dijitalụ afọ na-aga ịbụ a ọlaedo afọ nke nnyocha e mere nnyocha.
The akụkọ ihe mere eme nke nnyocha e mere nnyocha nwere ike Olee ihe enyemaka kere atọ overlapping eras, iche site na abụọ contested ikwu n'ụzọ (Groves 2011; Converse 1987) . Right ugbu a, anyị nọ n'oge nke mgbanwe dị n'etiti nke abụọ na nke atọ eras, ma ndị mbụ na nke abụọ eras-nakwa ntughari n'etiti ha-eme ka a ghọta ọdịnihu nke nnyocha e mere nnyocha.
Ke akpa oge nke nnyocha e mere nnyocha, Olee ihe enyemaka 1930 - 1960, tolite na nkà mmụta sayensị na nlele na ajụjụ imewe nke nta nke nta rụpụtara na a oge a nghọta nke nnyocha e mere nnyocha. The mbụ oge nke nnyocha e mere nnyocha e ji mara ebe puru omume ụfọdụ na ihu na ihu ajụjụ ọnụ.
Mgbe ahụ, a nkà na ụzụ-ahụ zuru ebe nile mgbasa nke Landline igwe na mba ndị bara ọgaranya-emecha mere ka nke abụọ oge nke nnyocha e mere nnyocha. Nke abụọ a na oge, Olee ihe enyemaka site 1960 - 2000, e ji random ọbula Ịpị (RDD) nke puru omume ụfọdụ na ekwentị ajụjụ ọnụ. The mgbanwe site mbụ oge ka nke abụọ oge rụpụtara na isi-abawanye na arụmọrụ na mbelata na-eri. Ọtụtụ ndị nnyocha na-ele nke a nke abụọ oge ahụ bụ ọlaedo afọ nke nnyocha e mere nnyocha.
Ugbu a, ọzọ nkà na ụzụ-dijitalụ ebighi-ga-emecha mee anyị ka anyị a atọ oge nke nnyocha e mere nnyocha. Mgbanwe a ka a na-chụpụrụ site ma push na sere ihe. Na akụkụ, na-eme nnyocha na-a na-amanye ịgbanwe n'ihi na-eru nso nke abụọ oge na-ada ada na dijitalụ afọ (Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . Dị ka ihe atụ, ihe na ọzọ ụlọ na-adịghị Landline telephones na-abụghị omume udu-zaghachirinụ na-sampled ma ị dịghị eso eme nnyocha ndị e mere-e-amụba (Council 2013) . N'otu oge a mmebi nke abụọ-oge na-eru nso ka ụfọdụ na ajụjụ ọnụ, e nwere na-amụba e big data isi mmalite (lee Isi nke 2) na-egosi na ize dochie nyocha. Tụkwasị na nke a push ihe, e nwere ndị sere ihe: na-atọ oge na-eru nso na-enye ịrịba ohere, dị ka m na-egosi ke ibuot emi. Ọ bụ ezie na ihe na-adịghị kpamkpam biri ma, m na-atụ anya na nke atọ oge nke nnyocha e mere nnyocha ga-eji mara ndị na-abụghị nke puru omume ụfọdụ na kọmputa-ndinọ ajụjụ ọnụ. Ọzọkwa, ọ bụ ezie na na mbụ eras na-ji ha bịara ibi nwatakịrị ụfọdụ na ajụjụ ọnụ, m na-atụ anya na nke atọ oge nke nnyocha e mere nnyocha a ga-ji linkage nke nnyocha ndị e mere na nnukwu data isi mmalite (Isiokwu 3.1).
Isiokwu 3.1: Three eras nke nnyocha e mere nnyocha. Ibuot emi ga-elekwasị anya na nke atọ oge nke nnyocha e mere nnyocha: na-abụghị nke puru omume ụfọdụ, kọmputa-ndinọ ajụjụ ọnụ, na nnyocha ndị e mere na njikọ aka ndị ọzọ data.
data gburugburu ebe obibi
mbụ oge 1930 - 1960 Area gbasara nke puru omume nlele Ihu na ihu Guzo-naanị nnyocha ndị e mere
Nke abụọ oge 1960 - 2000 Random ọbula Ịpị (RDD) nke puru omume nlele ekwentị Guzo-naanị nnyocha ndị e mere
Nke atọ oge 2000 - ugbu Non-puru omume nlele Computer-ndinọ Nnyocha ndị e mere jikọrọ ọzọ data
The mgbanwe n'etiti abụọ na nke atọ eras nke nnyocha e mere nnyocha bụghị kpamkpam ezigbo, ma e nwere ọkụ arụmụka banyere otú na-eme nnyocha kwesịrị n'ihu. N'ileghachi anya azụ n'ihe ntughari n'etiti mbụ na nke abụọ eras, m na-eche na e nwere otu isi nghọta anyị ugbu a: mmalite bụghị ọgwụgwụ. Ya bụ, na mbụ ọtụtụ nke abụọ-oge ụzọ ndị ad-hoc na-arụ ọrụ nke ọma. Ma, site n'ịrụsi ọrụ ike, na-eme nnyocha edozi nsogbu ndị a, na nke abụọ-oge na-eru nso emecha di nma kari mbụ oge na-eru nso. Dị ka ihe atụ, nnyocha e eme na ekwentị random ọbula Ịpị ruo ọtụtụ afọ tupu Mitofsky na Waksberg mepụtara a random ọbula Ịpị ụfọdụ usoro nke nwere ezi bara uru na usoro iwu Njirimara (Waksberg 1978; Brick and Tucker 2007) . N'ihi ya, anyị ekwesịghị iche na nke ugbu a ala nke-atọ ndị oge na-eru nso na ha kacha esi. The akụkọ ihe mere eme nke nnyocha e mere nnyocha na-eme ka o doo anya na ubi evolves, chụpụrụ site mgbanwe technology na otu. E nweghị ụzọ ịkwụsị na ozizi evolushọn. Kama nke ahụ, anyị kwesịrị na-anabata ya, mgbe nọgidere na-ise amamihe sitere na mbụ eras. N'eziokwu, m kwere na dijitalụ afọ ga-abụ ihe kasị akpali akpali afọ maka arịọ ndị mmadụ ajụjụ.
The fọdụrụnụ nke isi-amalite site n'ikwu na nnukwu data isi mmalite agaghị eji dochie nnyocha ndị e mere na na ụba nke data na-abawanye-ọ bụghị mbelata-uru nke nnyocha ndị e mere (Nkebi 3.2). Nyere na-akpali, m ga-ichikota ngụkọta e mere na njehie kpuchie (Nkebi 3.3) na e mepụtara n'oge mbụ na nke abụọ eras nke nnyocha e mere nnyocha. Nke a kpuchie enyere anyị aka ịghọta ọhụrụ bịara ibi nwatakịrị onodi-akpan akpan, na-abụghị ihe gbasara nke puru samples (Nkebi nke 3.4) Nakwa Mgbe Ebighị ọhụrụ bịara ibi nwatakịrị mmesho-akpan akpan, na ụzọ ọhụrụ nke na-arịọ ajụjụ ndị zaghachirinụ (Nkebi 3.5). N'ikpeazụ, Aga m na-akọwa abụọ research ndebiri maka ejikọ nnyocha e mere data ka nnukwu data isi mmalite (Nkebi 3.6).